Diyo post :: के मैले 'माओवादी' भएर गल्ति गरेँ ? के मैले 'माओवादी' भएर गल्ति गरेँ ? - Diyo post
के मैले ‘माओवादी’ भएर गल्ति गरेँ ?
२०६३ सालकाे भाद्र महिना । भर्खरै १५ वर्ष पुरा भएर १६ मा टेकेको थिएँ । कक्षा ९ को प्रथम त्रैमासिक परीक्षा सकिएर अर्काे कक्षा सञ्चालन भैसकेको थियो । साथीहरुको लहैलहैमा विद्यालयबाट फर्केर घरमा किताब कापी फाँले । र, ढाटेर तत्कालिन विद्रोही पार्टी नेकपा माअाेवादीको कार्यक्रम हेर्न गएँ । राजनीतिप्रति कुनै चासो नभएता पनि जीवन शर्मा र खुसीराम पाख्रिनका जनवादी गीतहरुले मेराे मनलार्इ छाेयाे । साथीहरुकै लहैलहैमा पूर्णकालिन (whole Timer) कार्यकर्ता बनेँ । र, सांस्कृतिक फिल्डमा काम गर्न थालेँ । त्याे युद्धबिरामकाे समय भएता पनि गाउँघरतिर माअाेवादीकाे प्रभाव कायम नै थियो ।
म माअाेवादीमा हिँडेकाे थाहा भएपछि घरमा रुवाबासि चलेछ । आमा कति छाक भोकै बस्नुभएछ । कति रात अनिदै बिताउनु भएछ । माअाेवादीले थालेकाे सांस्कृतिक कार्यक्रममा हिड्न थालेँ । अभियानकै शिलशिलामा दिदीको घरगाउँमा पुग्दा दिदीको रुवाबासीले अहिले पनि मन चसक्क बनाउँछ ।
दसैँ तिहार हुदै १० महिनासम्म घर नजादा र घरमा कुनै सम्पर्क नहुँदा मेराे बुवाले कम्ति सास्ती भाेग्नु परेन । ‘यहाँ छ रे’ भन्ने सामान्य सुचनाका आधारमा २ दिनको पैदल यात्रा गर्दै ६५ बर्षे बुढो मेराे बुबा खोज्दै आउनुभएको थियाे । र, घर फर्किन भन्दै उहाँले आग्रह गर्दा मैले अस्वीकार गरेकाे थिएँ । त्यतिबेला उहाँकाे आँखाको आशुले कता कता अझै बिझाउँछ । सांस्कृतिक अभियानकै क्रममा रसुवा, नुवाकोट, गोरखा, चितवन र धादिङ्गका अधिकाशं भुभागमा प्रत्यक्ष रुपमा जनतासँग भलाकुसारी गर्ने अबसर पाएँ।
तत्कालिन नेकपा माअाेवादी पार्टी संविधानसभाको चुनावमा होमियो । लाखौ जनताको माया हजारौ पूर्णकालिन कार्यकर्ताको साथ, जनमुक्ति सेनाको ठूलो सहयोग र जनकलाकारको जनवादी गीत सङ्गीतका कारण पहिलाे पार्टी बन्याे । पार्टी सरकारमा गयो बिस्तारै सत्ताको उन्माद भरिदै गयो सरकारमा रहेकाहरुमा । हजारौँ पूर्णकालिन कार्यकर्ताको विचल्ली हुँदै गयो । अहिले न उनीहरुको गाँसको टुङ्गो छ न बासको । अहिले पनि पार्टी सरकारमा छ । कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्न चाह्यो भने असम्भव छैन । हिजो बुर्जुवा शिक्षाको विरोध गर्दै हिड्ने ‘म’ मा अब नपढी भबिस्य छैन भन्ने छाप परेपछि धेरै साथीहरुको बिरोधका बाबजुद पनि आफ्नो इच्छाशक्तिका कारण पढाइलाई निरन्तरता दिँदै अहिले स्नातकोत्तर दोस्रो बर्षमा अध्ययनरत छु ।
मलाई एस.एल.सि. र कक्षा ११ पढ्ने क्रममा आर्थिक रुपमा निकै ठूलो सहयोग गर्ने तत्कालिन माओवादी धादिङका सेक्रेटरीहरु ज्ञानु बस्नेत (आकाक्षां) र राजु नेपाल(विकास) लाई नसम्झिरहन सक्तिनँ । यस क्रममा धेरै साथीहरुको बिचल्ली भएको देखेको छु । कोही अरबको खाडीमा भौतारिदै छन् त कोही ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाउदै छन् । आफै पनि बैशाख जेठको मध्य घाममा महिनाको रु १५०० मा पत्रिका बाढ्दै हिडेको र सम्बन्धित संस्थाले पुरा पैसा नदिएको तितो अनुभव छ ।
हुन त पदको लोभ हिजो पनि थिएन आज पनि छैन र भोली पनि नहोला । हाल पार्टीको साधारण सदस्यसम्म पनि छैन । यो १० वर्षको अबधिमा आफूभन्दा पछाडि जोडिएका र सँगै सहकार्य गरेका केही साथीहरु आलिसान महलका मालिक भैसकेका छन् । चिल्ला पजेरो चढेर हिड्छन् । महिना महिनामा मोटरसाइकल फेरेर हिँड्छन् । ठुलाठुला पोष्टमा पुगेका छन् । जसले नेतृत्वको चाकडी चाप्लुसी गरे । कहिलेकाँही त लाग्छ गलत नै पो गरिएछ कि ? तर आस्था र आदर्शलाई कहिल्यै मर्न दिने छैन ।
पार्टि बिग्रिएको छ । राम्रा भन्ने नीति भन्दा हाम्रा भन्ने नीति लागु हुँदैछ । आफ्ना नजिकका र पैसावालहरुको हालिमुहाली छ पार्टीमा । अब पनि पार्टी सुद्धिकरण भएन र नेतृत्वले जिउ ज्यानको माया नगरी युद्ध र आन्दोलनमा होमिएका हिजोका कार्यकर्तालाई बिर्सिएर सहिद बेपत्ताहरुलाई भुलेर अहिलेका सुकिला मुकिला र पैसावालहरुलाई असली कार्यकर्ता मानि विश्वास गर्दै गएमा सहिद, बेपत्ता र पुराना कार्यकर्ता जसको अहिले गास बास कपासको कुनै टुङ्गो छैन तिनीहरुको रगत र पसिनाले पोल्ने छ र कालान्तरमा नेपालमा पनि माओवादी नाम गरेको पार्टी थियो रे भन्ने नहोला भन्न सकिन्न । बेलैमा सोच्न जरुरी छ ।
म त एउटा प्रतिनीधि पात्र हुँ । म आफ्नो खुट्टामा उभिएर खान सक्ने भैसकेको छु । तर आफ्नै आखाँले देखेको छु हिजो युद्धमा लागेकै कारण परिवार र समाजबाट एक्लिएर बेहाल जिन्दगी बिताइरहेका हजारौ योद्धाहरु । आफ्नो पढ्ने र सिप सिक्ने उमेर पूर्ण रुपमा पार्टीमा बिताएका र अहिले वार न पार भएर बिजोग अवस्थामा रहेका छन् ।
देवकाेटा पूर्वमाअाेवादी कार्यकर्ता हुन् ।
शिक्षा नियमावली बारेको भ्रम चिरौँ
शंकर अधिकारी शिक्षा नियमावलीको विषयमा थुप्रै भ्रमहरु विभिन्न मिडियाहरुमा आइरहेको पाइन्छ। यसको आधिकारिक जवाफ सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पारेको छैन । ...
रुघा खोकी लाग्दैमा क्लिनिक जानु हुन्छ की हुँदैन ?
-कृष्ण चापागाईं आधुनिक समय विज्ञान-प्रविधि, भौतिक उन्नति र प्रगतिको हो | यही भौतिकतामा रम्न मानिसले आफ्नो भौतिक र ...
धुर्त खड्क प्रसादको सत्ता टिकाउने खेल, ‘संविधानको चोर प्वालको खोजी’
केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट नेकपा (माओवादी) केन्द्र बाहिरिएपछि नेपाली राजनीतिमा हलचल पैदा भएको छ । सरकारबाट बाहिरिएसँगै माओवादी केन्द्र र ...
मेसीलाई एक नेपाली ‘फ्यान’को मार्मिक पत्र
प्रिय मेसी, संसारका तिम्रा करोडौं शुभचिन्तकहरु मध्ये म पनि एक हुँ । तिम्रा हरेक गोलहरुमा, तिम्रा हरेक सफलताहरुमा र तिमीले ...
करिश्मामाथि खुलेआम हिंसा गर्नेलाई के हुन्छ ?
अभिषेक घिमिरे नयाँ शक्तिको औपचारिक उद्घाटनका दिन करिष्मा मानन्धरका विषयमा भएका टिका टिप्पणीका विषयमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। केही ...
नयाँ शक्ति किन ?
ओमप्रकाश विश्वकर्मा मागेर अधिकार पाईँदैन । अधिकारका निम्ती संघर्ष अनिवार्य छ । अझै दलित, जनजाती, महिला, मधेशी र सिमान्तकृत वर्गले ...
मेरा काकालाई मेनपावरले यसरी लुट्यो
नारायण सिलवाल वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू ठगिएकोबारे थुप्रै समाचार लेखेँ । केही समयअघि १ लाख १० हजार तिरेर साउदी जान ...